Asa fanariana fandotoana: Ny fanadiovana ny PCB Plattsburgh - Ellicott Dredges
Ny fahavitan'ny tetik'asa fanondrahana PCB teo amoron'ny Lake Champlain ao Plattsburgh, NY, dia nanaporofo fa ny PCB dia mety hivoaka tsy ho tratry ny rano avy ao amin'ny Reniranon'i Hudson. Nandritra ny tokotanin-dranomasina Lake Champlain dia tsy natahotra, ny torapasika sy trano fandraisam-bahiny nijanona nisokatra nandritra ny telo taona, ary ny skeptics taloha dia mandoka ny fandidiana ankehitriny.
'Tsy nankasitraka an'io aho tamin'ny voalohany. Niahiahy ny hampihetsika zavatra aho. Tsy dia nisy dikany tamiko izany, 'hoy ny dokotera Djell Dahlen, dokotera mpandidy maso izay trano akaikiny no mifanila amin'ilay toerana amoron-dranomasina 34 hektara ao Cumberland Bay. 'Nefa amin'ny maha mpifanila vodirindrina ahy akaiky ahy dia tsy nanelingelina ahy kely akory izy io.'
'Nipetraka teo am-pitrandrahana ny gana rehefa mandeha ny dredge,' hoy i Bill Ebert, mpanara-maso ny injenieran'ny tetikasa Earth Tech Inc. Ilay tranonkala dia eo akaikin'ny moron-tanàna sy fanjakan'ny fanjakana ary koa hotely. 'Nisokatra ny morontsiraka. Nisokatra ireo trano fandraisam-bahiny. Nandeha ara-dalàna ny zava-drehetra, 'hoy izy. Nitohy nandritra ny 24 ora isan'andro ny asa fanaovana dredging, saingy tsy nahazo fitarainana, hoy i Ebert. 'Indraindray ny olona eo amin'ny paosiny ao amin'ny motel dia manofahofa anao.'
Ny fanadiovana ny PCB ao amin'ny Farihy Champlain dia nanodidina ny fanamby maro samihafa izay ho tafiditra ao amin'ny Hudson fandidiana fanodinkodinana, saingy vita ara-potoana, arakaraka ny teti-bola, tsy misy fiakarana feno loto. Ny hetsika dia nanala ny 25,000 kilao madio amin'ny PCB, mampihena ny fandotoana eny an-toerana mihoatra ny 90 isan-jato, raha mahazo fiderana avy amin'ny mpiara-monina.
Ity fahombiazana ity dia ho mora ny maka tahaka ny renirano Hudson, hoy ny injenieran'ny tetik'asa niandraikitra ny fanaovana dredging tany Plattsburgh. 'Eo ny teknolojia hanaovana azy tsara, mila manangana azy fotsiny ianao ary mifehy azy,' hoy i Lech Dolata, injeniera ao amin'ny Departemantan'ny fiarovana ny tontolo iainana. 'Ny fehiny dia miasa ny fanaovana dredging.'
Dolata dia nampiseho fomba fanamoriana faran'izay tsotra nefa mahomby amin'ny fanesorana ny fahatapahana vita amin'ny PCB. Ny valan-dranon-droa kely iray, izay manodidina ny 20 tongotra lava, dia miorina amin'ny rohy miorina amin'ny zotra manerantany (GPS) maneran-tany manaraka ny tsipika tadiavina, ary ny fandidiana dia mitohy amin'ny grids mampiasa tariby mihetsika manaraka ny làlana irina hamindra ny dredge. Ny fandidiana dia milamina, ny biby ary ny mpiara-monina tsy dia tsikaritr'izy ireo.
Eo am-pototry ny velaran-tany, fitaovana iray milanja enina metatra misy tafo no manapotika ny antsanga ary manery azy anaty anatiny, izay misy fantsona vaky misolelaka azy ao anaty fitoeran-drano voasarona. Ny ambainy lamba sy ny sakana hafa eo ambanin'ny rano dia mitazona ireo korontana ao anaty rano, fa any Plattsburgh dia tsy nisy fironana na solika na firy aza.
Georgia Pacific Corporation dia manamboatra fantsom-pandrindrana ao anaty rano dimampolo metatra amin'ny tranokala fanamainty, ary mitaky fanazavana rano izay tsy mihoatra ny faritra 2 isaky ny miliara amin'ny singa voatazona. Ebert dia nilaza fa ireo mpandraharaha ny dredge dia nisedra tsy tapaka, saingy nitazona hatrany ireo fepetra takiana, ary afaka mivelatra mandritra ny fizotran-dresaka ny valva.
Raha vao tany amoron-dranomasina dia natsangana ilay menaka mba hampihenana ny lanjany ary hizaha toetra ny poizina. Nalefa tany Buffalo ny fisandohana mampidi-doza avy any Plattsburgh, raha toa kosa ny tsodrano tsy dia voaloto dia nentina tany amin'ny tondra-drano iray tany Quebec. Notsaboina ilay rano ary naverina tany amin'ny Lake Champlain. Ny fitsapana dia naneho fa madio tsara ny laharana ho toy ny rano fisotro.
General Electric, ny orinasa tompon'andraikitra amin'ny fandotoana PCB mahatonga ny Hudson ho tranokala Superfund federaly, nilaza fa hanakorontana ny tontolon'ny renirano ary handany ny toekarena eo an-toerana. Ny GE dia mandany vola an-tapitrisany dolara isan-kerinandro amin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra mampiseho ireo dredges misy fotaka mando lava be. Saingy araka ny filazan'ny manampahefana EPA sy ny DEC dia mpitsambikina no lalana, fa tsy fanodinkodinan'ny tontolo iainana ary tsy voadinika ho fanadiovana ny poizina izay nariana tamin'ny ony. Araka ny lalàna federaly, tompon'andraikitra amin'ny zom-pirenena maro no tompon'andraikitra amin'ny fanesorana ny poizina, ny vidin'ny GE tsy te handoa.
Raha nanary PCB iray tapitrisa na mihoatra ny PCB tao anaty renirano ny General Electric, dia tsy teo amin'ny toerana iray daholo izany, fa niitatra 40 'toerana mafana' teo amin'ilay renirano teo anelanelan'ny Glens Falls sy Albany. Nifindra avy tany amin'ireo faritra ireo ny poizina, niditra tao anaty rojom-bary, ny tsanganana rano, fotaka manamorona ny morontsiraka ary ny rivotra. Ny fitaovana hitrandrahana dia hasiana habe araka ny takian'ny haben'ny toerana mafana tsirairay. Ny fitaovana fanamorana hetaheta sy ny fanadiovana ny rano dia azo entina ao anaty sy ivelan'ny toerana ilana azy, mamerina ny teknika nampiasaina tany Plattsburgh. Tsy mila toeram-pitsaboana maharitra.
Vonona ny USEPA hanambara ny fanapaha-kevitra momba ny vahaolana amin'ny fandotoana PCB izay nahatonga ny Reniranon'i Hudson ho toerana fako misy poizina tsy miankina amin'ny fanjakana lehibe indrindra any Amerika.
Ny Cumberland Bay any Plattsburgh ao amin'ny Lake Champlain dia toerana iray an'ny Kilasy Superfund ao amin'ny sokajy roa, izay mitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny tontolo iainana. Ny fitrandrahana PCB dia nihena ny ampahany 2000 iray tapitrisa. 50 ppm konsentrera dia raisina ho mampidi-doza amin'ny fomba ofisialy. Ny fanadiovana PCB amin'ny Farihy Champlain dia mampihena ny fifantohana amin'ny salanisan'ny 10 ppm.
Ny habaka dia nahitana tany lemaka valo hektara sy tanimbary 50 ambanin'ny farihy anaty rano, izay nametrahan'ireo PCB. Rehefa nesorina ny asa sy ny fitaovana, manapa-kevitra i Plattsburgh raha ho tranon'ny sambo ny tranokala, na mety valan-javaboahary iray aza. Dahlen, izay faly tamin'ny volavolan-dalàna tamin'ny mpiasa tamin'ny fandatsahan-drongony, hoy ny fihomehezana fa aleony ny zaridainan'ny zaridaina ho an'ny lampihazo, saingy aleo koa ny toerana mety hanimba ny toerana fako mampidi-doza.
Namboarina avy amin'ny Clearwater News & Bulletins Web Site